Godina Arsii Lixaatti poolisoonnii fi hidhattoonni qawwee hiikkataa manguddotti kennaa jiru - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Godina Arsii Lixaatti poolisoonnii fi hidhattoonni qawwee hiikkataa manguddotti kennaa jiru
Hnaga ammatti qawween 70 oli harka manguddoo seenuun hubatameera
Godina Arsii Lixaa magaalaa fi baadiyaa heddu keessatti poolisoonnii fi hidhattoonni naannoo qawwee hiikkataa manguddotti laataa jiru. Hanga ammaatti magaalaa Seeroftaa, Kofalee, Kokkosaa fi Shaashamanneetti qawween 70 oli harka manguddoo seenuu gabaasni addaddaa agarsiisa. Godina kana keessatti waajjirri mootummaa, manniin kaabinee fi qabeenyi Woyyaanee tokko osoo hin hafin ibiddaan cilaawee jira. Humna Agaazii irraa heddu ajjeefamuunis hubatameera.
Sa’aa kanatti mootummaa wanti jedhu godina Arsii Lixaa keessa akka hin jirretu himama. Umanni sochii caasaa ufii tolfachutti seeneera. Magaalaa fi baadiyaa heddu irraa ummanni walitti bayee yoo humni Agaazii gara naannoo isaanii dhufe ijoollee ufii irratti dhumuu fi gibira kaffalluu diddaa irratti walii galee jira. Akkasumas miseensot OPDO gara godinaatti Agaazii masakanii fidanii fi ganda keessa deemaa Qeerroo saxilan irratti tankaarfii hanga lubbuutti gayu fudhachuuf murteeffataniiru.
Sa’aa kanatti gaafiin ummataa tokkoof tokko ta’eera: mootummaan Woyyaanee nu hin bulchu isa jedhu. Ammas hanga mootummaan kuni kufutti gatii fedhe yoo kan isaan kaffalchiisus ta’es qabsoo eegalan cimsanii itti fufuudhaaf waadaa waliif seenanii gargara galan.
Previous articleFincilli ummataa Itoophiyaa raasaa jira, jedha Reuters
Next articleMootummoota Gamtoomanitti Komishinarri Falmaa Mirganamoomaa ajjeechaan atattamaan haadhaabatu, yakkamaanis seeraaf haa dhiyaatu jedha